FAQ - Shanghai Langyi Inoshanda Zvishandiso Co., Ltd.
Chii chinonzi antibacterial? Ndeipi nzira yekuita yeanthibhakitiriya mumiririri?
Mishonga inorwisa mabhakitiriya izwi rinowanzoitika, kusanganisira kuvharisa, kubereka, disinfection, bacteriostasis, mildew, corrosion, zvichingodaro. Maitiro ekuuraya mabhakitiriya nemakemikari kana nzira dzepanyama kana kutadzisa kukura, kubereka uye chiitiko chehutachiona chinonzi sterilization uye bacteriostasis.
Muma1960s, vanhu vainyanya kushandisa ma organic antibacterial vamiririri kugadzira machira ekurwisa mabhakitiriya. Nokubudirira kubudirira kwemaorganic antibacterial agents muna 1984, kupedzisa mabhakitiriya kwakagadzirwa nekukurumidza, zvichiita kuti maantibhakitiriya asashandiswe chete mu fiber nemicheka, asiwo anoshandiswa mumapurasitiki, zvekuvakisa nezvimwe zvigadzirwa.
Muzana ramakumi maviri nemasere, nekuuya kwenzanga yekuchembera, huwandu hwevanhu vakarara pamubhedha uye vanochengetedza dzimba vanowedzera zvishoma nezvishoma, uye kudiwa kwezvinhu zvekuchengetedza vakwegura kudzivirira maronda emubhedha kwakawedzerawo.
Nekuda kweshanduko kubva munharaunda inoteedzera kugadzirwa kuenda kune yehupenyu, chichava chinyorwa chakakosha mune ramangwana kugadzira nekutsvaga zvigadzirwa zvinobatsira kuhutano hwevanhu uye nharaunda yepasi.
Parizvino, kune matatu makuru ekurwisa mabhakitiriya emishonga inorwisa mabhakitiriya: kuburitswa kwakadzorwa, regenerative musimboti uye chipingaidzo kana ichivharira mhedzisiro.
Iko kushandiswa kwazvino kwemaantimicrobial akakodzera kwakatenderedza kuchengetedzeka uye kugadzikana kwekushandisa, pamwe nekusimba kwekuita. Nekusimudzira kwekuziva kwevanhu nezvekudzivirirwa kwezvakatipoteredza, zvisikwa zveantimicrobial zvinokwezva zvakanyanya, senge chitosan uye chitin, nezvimwe zvakadaro, zvisikwa zveantimicrobial zvine kushomeka kuri pachena mukushomeka kwekupisa uye nekusimba kwemabhakitiriya. Kunyangwe organic maantimicrobial anoshandiswa zvakanyanya, ane zvimwe zvikanganiso mukupisa kupisa, kuchengetedzwa kuburitswa, kusagadzikana kwemishonga uye zvichingodaro. Inorganic antibacterial mumiririri rudzi rweantibhakitiriya mumiririri rinoshandiswa zvakanyanya mumusika, tekinoroji yacho yakura zvakanyanya, uye ine zvimiro zviri pachena mukushomeka kwekupisa, chengetedzo, kuita kwenguva refu uye zvimwe zvinhu, iko kushambadzira kwekutarisira uko kwakanaka kwazvo.
Shanghai Langyi Inoshanda Zvinhu Zvekushandisa Co., Ltd. inotarisa pakupa yakakosha mashandiro ekuwedzera mhinduro kune ester yakavakirwa polymer zvinhu, uye inoenderera ichipa yakazara-hupenyu-kutenderera kunoshanda kwakasiyana masevhisi eester yakavakirwa polymer indasitiri cheni vatengi. Isu takazvimiririra takagadzira AntibacMax®, inorganic simbi ion inorwisa mabhakitiriya mumiriri, mukupindura kumusika zvinoitika uye zvitsva zvinoda vatengi. AntibacMax®inogona kuburitsa zvakaringana sirivheri, zinc, mhangura uye mamwe maantibhakitiriya ions, uye ine yakanaka bacteriostatic mhedzisiro pane yakafara-chakasarudzika zvipenyu fungi. Tichiomerera kuchimiro chetsika yechiChinese uzivi - "kubatana kwehana, ruzivo uye maitiro", kambani inopa zvigadzirwa, masevhisi uye kukosha kwemhinduro kune vatengi, vashandi, vagovani, nzanga nevamwe vanobatana.
Zvakawanda sei zvaunoziva iwe nezvemaorganic antimicrobial?
Mumakore achangopfuura, pakave nekuwedzera kuitika kwezviitiko zvakaipa zvinokonzerwa nemajemusi. Zvinoenderana nekunzwisisa kwedu, mhando zhinji dzehutachiona dziri muchimbuzi, senge E. coli, Staphylococcus aureus, staphylococcus chena, bacillus subtilis, tetralococcus, nezvimwewo Zvinhu zvakawanda pamba zviri nyore kuberekera mabhakitiriya. Naizvozvo, maitiro ekuvandudza dambudziko iri rinovimba neanorwisa mabhakitiriya mumiriri.
Muzvisikwa, kune zvinhu zvakawanda zvine yakanaka bactericidal kana inhibitory basa, senge mamwe makemikari makemikari nemapoka akasarudzika, zvimwe zvisina kujairika simbi zvigadzirwa uye avo makomputa, mamwe mamineral uye zvakasikwa zvinhu. Asi parizvino, zvinhu zvinorwisa mabhakitiriya zvinonyanya kureva izvo zvinhu zvine kugona kudzivisa kana kuuraya mabhakitiriya kuburikidza nekuwedzeredzwa kweimwe inorwisa mabhakitiriya zvinhu (inozivikanwa seanorwisa mabhakitiriya), senge inorwisa mabhakitiriya epurasitiki, inorwisa mabhakitiriya uye jira, antibacterial ceramics, antibacterial simbi. zvishandiso.
I. Musimboti webacteriostasis
A) Nzira yesimbi ion contact reaction
Iyo yekudyidzana yekuita inokonzeresa mukuparadzwa kana kusagadzikana kwekushanda kwezvinhu zvakajairika zvikamu zveiyo microorganism. Kana iyo ion yesirivheri yasvika kune membrane yeiyo microorganism, inokwezva necoulomb simba rekutadza kwakashata, uye sirivhe sac inopinda muchitokisi, inopindirana ne -SH boka, ichiita kuti protein irambe ichiparadzanisa zviitiko zve synthase.
B) Catalytic activation mashandiro
Zvimwe zvinoteedzera zvinhu zvesimbi zvinogona kusanganisa kana kugadzirisa nemapuroteni, asina kushatiswa mafuta acids uye glycosides mumasero ebacteria, achiparadza chimiro chavo, uye nekudaro achivaita kuti vafe kana kurasikirwa nekwaniso yavo yekuwedzera.
C) Cationic kugadzirisa mashandiro
Mabhakitiriya asina kubhadhariswa zvinokwezva kukati pazvinhu zvinorwisa mabhakitiriya, zvinodzivisa kufamba kwavo pachena uye kutadzisa kugona kwavo kufema, zvichikonzera "kubata rufu".
D) Kukuvadza mashandiro emaseru zvirimo, ma enzymes, mapuroteni uye nucleic acids
Mishonga inorwisa mabhakitiriya inoita neRNA neDNA kudzivirira fission uye kubereka.
Kutarisira pamusika maitiro uye nyowani mutengi kudiwa, Shanghai Langyis Inoshanda Zvinhu Zvekushandisa, Ltd yakazvimiririra yakagadzira AntibacMax®, inorganic simbi ion inorwisa mabhakitiriya mumiriri. AntibacMax®inogona kuburitsa zvakaringana sirivheri, zinc, mhangura uye mamwe maantibhakitiriya ions, uye ine yakanaka antibacterial mhedzisiro pane yakafara-spectrum yehupenyu fungi. Inofananidzwa neye organic antimicrobial vamiririri, AntibacMax® ine zvirinani kupisa kupisa, kusunungurwa kwenguva refu, kugadzikana kwemakemikari uye chengetedzo.
Chii chinonzi antibacterial plastiki masterbatch?
Antibacterial plastiki masterbatch chinhu chitsva chemakemikari inorwisa mabhakitiriya yakagadzirwa uye inogadzirwa nehunyanzvi hwehunyanzvi. Inoshandiswa mumarudzi ese epurasitiki zvigadzirwa, haina kukuvadza kumuviri wemunhu uye ine antibacterial mhedzisiro pamarudzi ese ehutachiona hunokuvadza uye chakuvhuvhu.
Mushure mekuvhuvhuta kuumbwa, kumanikidzwa kuumbwa, kuumbwa nekuumbwa uye kumwe kugadziriswa, antibacterial epurasitiki masterbatch inogadzira chikafu chekutakura zvinhu, zvekurapa, midziyo yemumba, mota yemukati yekushongedza zvinhu, yakakosha quartermaster zvigadzirwa, zvekushandisa zvevana uye zvimwe zvinyorwa zvekushandisa kwemazuva ese uye zvigadzirwa zveindasitiri zvine antibacterial basa .
Inoshanda resin: PE, PP, PC, PET, PS, PU, ​​ABS, SAN, TPU, TPE (anti-bhakitiriya, anti-hwema, mwando, anion, microwave inodzivirira, infrared yekuparadzira basa, fiber kutenderera), yakakosha munitions.
Antibacterial epurasitiki masterbatch
Zvimiro: hapana chepfu kuburikidza nemuromo, hapana kutsamwa paganda, hapana chepfu mune zvakatipoteredza; Hapana mahormone ezvakatipoteredza; Ivai nechokwadi Anti-mabhakitiriya, Anti-chakuvhuvhu maturo; Iine hunyanzvi hwekuita uye huwandu hwakawanda hweanti-mabhakitiriya, anti-mold, anti-algae kuita; Anogara aripo mabhakitiriya mhedzisiro; Kuchena kwakanaka uye kupisa kupisa;
Kushanda: zvigadzirwa zvemagetsi, zvinodiwa zvezuva nezuva, zvekurapa, zvekushandisa zvevana, zvikamu zvemota, zvekutakura zvekudya, zvakasarudzika zvemutariri wekota, nezvimwe.
Shanghai Langyi Inoshanda Zvinhu Zvekushandisa Co., Ltd. inotarisa pakupa yakakosha mashandiro ekuwedzera mhinduro kune ester yakavakirwa polymer zvinhu, uye inoenderera ichipa yakazara-hupenyu-kutenderera kunoshanda kwakasiyana masevhisi eester yakavakirwa polymer indasitiri cheni vatengi. Langyi anoona "tekinoroji yekuvandudza" senheyo yekusimudzira bhizinesi uye inokurudzira akawanda-ekuranga akasanganiswa matsva. Isu tinoisa mari inopfuura 10% yemitero yedu muR&D gore rega rega, uye nekuvaka timu inowiririka yeR & D ine simba rakasimba rehunyanzvi pamwe neFudan University, Donghua University uye mamwe mayunivhesiti. Takakunda mazita mazhinji ekuremekedza akadai se "Shanghai Yepamberi Yekuita Enterprise", "Shanghai High-tech Enterprise", "Shanghai Yakasarudzika Nyowani Nyowani uye Midiki-saizi Enterprise" zvichingodaro.
Polymeric Antihydrolysis Mumiriri, Antibacterial Masterbatch, Antibacterial Nonwoven Cloth, Antibacterial Yarn, Antibacterial Melt-Yakavhuvhuta Masterbatch, Antibacterial Electret Masterbatch,